Ra'isul Wasaare Khayre oo Ka Hadlay Heshiisyo uu La Galay Midowga Yurub | SAHAN ONLINE
Ra’isul Wasaare Khayre oo Ka Hadlay Heshiisyo uu La Galay Midowga Yurub
MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre, oo maanta dib ugu soo laabtay magaaladda Muqdisho ayaa ka warbixiyay safarkii Brussels iyo natiiijooyinkii kasoo baxay kulamadii uu la qaatay madaxdii kala duwaneyd iyo shirkii looga hadlayay amniga dalka.
Waxuuna sheegay in Midawga Yurub ay kula heshiiyeen in ay ku kaalmeeyaan dawladda Soomaaliya €100 milyan oo Euro oo miisaaniyadda dalka lagu kabayo, taas oo si toos ah loogu shubayo qasnadda Bangiga dhexe ee Soomaaliya, sidoo kale midowga Yurub ayaa balan qaaday in €80 Milyan oo Yuuro ay ku bixin doonaan qorshaha aminga iyo kala guurka ciidmada dawladda federaalka.
wuxuu kaloo xusay in Midawga Yurub in ay dawladda Soomaaliya kala shaqeeyaan ka hortagga jaridda dhirta, dhoofinta dhuxusha sharci darada ah iyo in sannadka soo socda shir noocaan oo kale ah lagu yeesho wadanka Belgium.
“Madaxdii ka soo qayb gashay shirka waxay cadeeyeen in Soomaaliya ay bilowday baal cusub oo horumarineed, taas oo ay kula jaan qaadi doonto caalamka, waxayna balan qaadeen in ay hab ka wanaagsan sidii hore ay u caawin doonaan Soomaaliyada cusub.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Intii uu ku sugnaa Caasimadda Brussel wuxuu Ra’iisul Wasaarahu kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Belgium, madaxa ugu sareeya midawga Yurub ee u qaabisan arrimaha siyaasadda dibadda, madaxda midawga Yurub u qaabishan howlaha horumarinta, kauulmeysiga iyo gar-gaarka, Safiirada midawga Yurub u qaabishan amniga iyo siyaasadda, safiirro kasoo jeeda Afrika, Caribbean-ka iyo Pacifica oo ku midoobay urur ay Soomaaliya qeyb ka tahay.